Maika loatra ity herinaratra ity ! | NewsMada
Maika loatra ity herinaratra ity !
Olana tsy voavaha hatramin’izao ny famatsiana herinaratra any amin’ny faritra maro. Voalazan’ny sasany moa fa tsy misy ny tompon’andraikitra, mbola tsy voatendry ny tale jeneraly. Tsy takona afenina koa anefa ny fahanteran’ny milina mampihodina herinaratra, raha mandeha indray ny milina, tsy misy ny solika matetika. Izay ny tatitra ampitain’ireo mpiasan’ny Jirama any amin’ny faritra. Kaominina ambanivohitra maro mijaly noho izany.
Vokany, miala tsikelikely ireo orinasa madinika, very asa manaraka izany koa ny mpiasa any amin’ireny toerana ireny. Eo ihany anefa ireo orinasa voatery mamokatra herinaratra manokana ho azy, mampitombo ny fandaniana amina sehatra misy azy. Mitombo manaraka izany koa ny masonkarena amin’ny fihariana ataony. Sahirana ny betsaka amin’ireo orinasa madinika mpisehatra amina fanodinam-bokatra, na ireo mpivarotra tsotra fotsiny aza. Mitombo miaraka amin’izany ny vidim-bokatra sy ireo zavatra ilain’ny mponina andavanandro.
Na ny sehatry ny fitaterana aza, tojo fahasahiranana amin’izao tsy fahampian’ny herinaratra izao. Voatery miakatra an-tanàn-dehibe ny fiara vao mahita solika. Tsy misy fanaraha-maso ny fitaterana raha any amin’ny kaominina ambanivohitra. Tsy lazaina intsony ny tsy fandriampahalemana. Maika loatra ity herinaratra ity !